Go'aanno laga soo saarey Sicir bararka ka jira Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Go’aanno laga soo saarey Sicir bararka ka jira Puntland
Guddiga uu maamulka Puntland u xil-saartey kasoo tala bixinta dhibaatooyinka ka taagan sarifka lacagta shilin Soomaaliga ee qiimo dhaca weyn ku yimid ayaa galabta soo saaray go’aamo ay ku sheegeen in xal loogu heli karo arintan.
GAROWE, Soomaaliya –Shir jaraa'id oo uu guddigu ku qabtay magaalada Garowe ayuu kusoo bandhigeen 13 qodob oo ka soo baxay wadahaladii iyo wada-tashiyadii ay bulshada lala soo sameeyay, si loo soo celiyo qiimaha lacagta Shilin Soomaaliga.
Sida guddigu sheegey, Maamulka Deni iyo Ganacsatada ayaa suuqa galin doona lacag gaareysa laba milyan dollar, halka la xareynayo laba bilyan oo lacagta Shilin Soomaaliga ah.
C/raxmaan Faroole ayaa hogaaminaya guddiga oo uu magacaabey Deni, kaasoo loo xil-saarey kasoo tala-bixinta sida ugu macquulsan ee lagu xlain karo dhibaatada Sicir-bararka iyo diidmada Shilin Soomaaliga.
Waxaa la fasaxay lacagihii taleefoonada la iskugu diri jiray ee horay loogu jaan-gooyay in aan la isku diri karin hal dollar iyo wax ka yar, Sidoo kale Guddiga ayaa go’aamiyay in 20% shilin Soomaali lagu qaado canshuurta dekeda magaalada Boosaaso.
Sidoo kale, Maamulka wuxuu mushaarka iyo qarashaadka kale ku bixin doonaa Shilin Soomaali, iyadoo Bangiga Puntland uu jaan-goyn doono qiimaha lagu sarifo boqolka dollar suuqyadda.
Sicir-bararka ayaa sababay banaanbaxyo ka dhan ah maamulka ka jira Puntland inay ka dhacaan Garowe, Boosaaso iyo Magaalooyin kale, iyadoo la xiray ganacsiga intiisa badan.